Antony 3 hanaovanao « blush » isan’andro …manomboka izao
« Baumes à lèvres », tsy azo hanaovana matetika
Faritry ny vatana mila koloina manokana ihany koa ny eo amin’ny molotra. Mandavan-taona no hanaovana izany saingy hamafisina sy atao miavaka kosa izany rehefa ririnina toy izao ny andro. Hisorohana ny molotra vakivaky, mangana, na mikentrokentrona no anton’izany… Indro àry ny torohevitra fikoloana ny molotra amin’izao andro mangatsiaka izao.
Karaoty, akondro,… manatanora endrika vetivety
Tsotra kely ny fomba fikolokoloana tarehy amin’ny alalan’ireo akora natoraly toy ny voankazo sy legioma. Ireto aroso anao ireto izao dia akora natoraly telo karazana, samy haingam-piasa raha hiady amin’ny kentrona sy hanatanorana ny endrika.
Mampaniry volo ny voana papay
Ahitana singa antsoina hoe : « acide folique » ny voana papay. Io singa io izay manamora ny fikorian’ny singa antsoina hoe : « follicules pileux » izay mampaniry ny volo. Ankoatra izay anefa dia miaro amin’ny karazana aretin’ny hodi-doha ihany koa izany. Andramo ary ity maska ity mba hampaniry volo.
Fomba 4 mahatsara tarehy lalandavaFomba 4 mahatsara tarehy lalandava
Ny vehivavy rehetra dia te hanana tarehy tsy misy tomika mandavan-taona avokoa.
Crème dépilatoire : Tsy manimba hoditra ve ?
Akora fampiasa amin’ny fanalana volo ny “crème dépilatoire”. Tsotra fampiasa izy itony, efa maro karazana rahateo eny an-tsena, … fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ahoana no fampiasa azy ? Inona no tena tsara ? Tsy atahorana amin’ny hoditra ve ? …
Ranomanitra, manafana rehefa ririnina …
Raha karazan’ireo olona tokam-po amina ranomanitra iray na vitsivitsy ianao, dia tokony hahafantatra fa rehefa miova vanim-potoana toy izao dia tokony hiova ihany koa ny ranomanitra hanaovana.
Relooking : “Maquillage” sy taovolo ihany dia manova be
Mirotoroto lava eo amin’ny asa aman-draharahany amin’ny andavanandro i Meva. Izy no maodely noraisin’ny matihanina izay nandray ny Jejoo anio.
Manomboka izao ianao dia ho resy lahatra, fa hanatsara endrika anao isan’andro no sady tena ilainao ny fanaovana “blush” eo amin’ny laingon-tava. Tsy voatery hanao haingon-tava be sy “maquillage” manao ahoana mantsy, fa ny laingon-tava fotsiny no haingoana, dia ho manjamanja sy velom-bolo ianao hiatrika ny tontolo andro …
Mampavitrika endrika eo no eo
Raha tsapanao fa vizambizan’endrika ianao dia hamaha an’izay olana izay ny “blush” na ny “fard à joues” hoy isika, izay apetraka eo amin’ny takolaka. Mamelombelona ny endrika izy ireny, ary manazava azy koa. Amin’ny andro mangatsiaka dia mameno hafanana sy mampibontsimbontsina endrika ny “blush”. Amin’ny andro mafana indray, dia mamelombelona sy manaitra ny tarehy malok’endrika sy vizana izy. Tandremo anefa fa tsy afotetaka ny « blush » sao vao mainka hanantitra ny endrikao sy hanimba azy indray. Raha diso be loatra, tsy natao fanahy iniana kosa indray, dia faona moramora amin’ny « pinceau » na tsindriana « poudre » kely, raha manana.
Azo lalaovina hanitsiana ny firafitry ny tarehy koa anefa ny “blush”.
- Ho an’ny tarehy fisaka sy manify dia azo atao ny manome hadiry azy, amin’ny alalan’ny “blush”. Mitsikia faran’izay tratran’ny molotrao mba hiseho avokoa ny molotra. Eo amin’ny faritra farany indrindra izay midongona amin’ny takolaka eo am-pitsikiana iny no asiana blush kely dia ahosotra eo amin’ny manodidina eo.
- Raha boribory be ny tarehy, dia “blush mat” ireny no ampiasaina. Fady ny “blush irises” satria vao mainka manome hadiry izany. Eto indray dia ny faritra milempona no asiana an’ity akora ity.
- Ny tarehy lavalava kosa indray, dia eo atao somary mitsivalana ny fanosotra ny “blush”. Miala eo amin’ny laingon-tava, ary sintonina mihazo ny sofina.
Mety amin’ny lokon-koditra rehetra
Tombony goavana amin’ny fampiasana “blush” ny fanomezany vahana sy hatsarana ny karazan-kendrika tsirairay, tsy misy an-kanavaka. Misy ho an’ny rehetra mantsy ny “blush”.
- Raha mazava loko ianao, somary fotsifotsy, dia ireo “blush” miloko mavokely “pastel” na “bois de rose” dia tena hanendrika anao. Hanalefaka ny endrikao izany.
- Raha somary matromatro-doko ny endrikao, somary mangamanga na zarazara, dia ireo “blush” miloko “prune”, rose-fuschia”, na koa mena matsatso no hanendrika anao. Mahaiza mandanjalanja tsara ny fatrany dia hanendrika hatramin’ireo mainty fihodirana aza izany.
- Ho an’ny rehetra kosa, ary tsy manavaka fa manatsara azy rehetra ny loko “peche”, ny “corail” ary ny “orange”.